Saynisyahannada ayaa magacaabay suurtagal suurtagal ah kuleylka aan caadiga ahayn ee Siberiya
Bishii Juun 16, warbixin ayaa waxaa daabacay koox ka mid ah saynisyahannada Ruushka iyo Yurub (wakiilo ka socda Russia, Great Britain, France, Holland, Germany iyo Switzerland) kuwaas oo baaray sababihii "hirarka kululaa" ee Siberiya bilaha Janaayo-Juun ee sanadkan. Shaqada kooxdu waxay ka dhacday qaab dhismeedka barnaamijka Qaramada Midoobay ee Deegaanka waxaana ka soo qayb galay xubno ka socda Golaha Khubarada Caalamiga ah ee Isbedelka Cimilada (IPCC). Cilmi baadhayaashu waxay gaadheen gabagabadii in sababta ugu weyn ee “kuleylka Siberian” ay tahay qodobo dadku sameeyay iyo natiijooyinka waxsoosaarka aadanaha.
Bisha Juun 20 ee sanadkaan, heerkulka hawada ee Siberian Verkhoyansk, oo ah mid ka mid ah xarumaha qabow ee meeraha, ayaa kor u kacay + 38 ° C. Celceliska heerkulka Siberberiya laga soo bilaabo Janaayo illaa Juun wuxuu ka sarreeyay celcelis ahaan celcelis ahaan 1981-2010 5 digrii. Tani waa tiradii ugu badneyd muddo 130 sano oo indha indheyn ah.
McDonald's wuxuu ururiyey in kabadan 45 tan oo qashin ah guud ahaan Ruushka
Warshad si qoto dheer loogu farsameeyo hadhuudhka ayaa laga dhisi doonaa Territory-ka Krasnoyarsk
Qaab dhismeedka barnaamijka Ka-qaybgalka Cimilada Dunida, saynisyahano adeegsanaya qaababka moodegga cimilada waxay ogaadeen in "hirar kuleyl" gaar ah oo noocaas ah ay ka abuurmi karaan Siberiyaanka la'aanteed qodobbada teknolojiyadda hal mar 80 sano kasta. Marka la eego qiiqa hawada gaaska badan leh, ifafaalaha noocan oo kale ah ayaa laga yaabaa inay soo noqdaan xitaa kahor dhamaadka qarnigan.
Qaabaynta xisaabaadka, khubaradu waxay ku xisaabiyeen in 5ta darajo ee dhaaftay heerka heerkulka muddo 130 sano ah, in ugu yaraan 2 darajo ay “waajib” ku yihiin arrimaha farsamada. Sannadkii 1900, saamaynta “kuleylka Siberian” waxay ka yaraan lahayd 2 digrii mid ka liita Janawari-Juun 2020.
Kuleylka Siberiyaanka waxay saameyn xun ku yeelan doonaan deegaanka gobolkaan. Waxay dardargelin doontaa dhalaalida baraf-cagafka ee gobollada mandaqadda, waxay horseedi doontaa baabi'inta geedaha iyo doogga kale, soo bixitaanka dababka duurjoogta weyn, soo bixitaanka tirada badan ee cayayaanka waxayna sababi doonaan aafooyin kale. Qayb ahaan kuleylka Siberiyaanka ayaa durba abuuray shuruudaha ka soo bixitaanka musiibo deegaanka: Bishii Meey ee sannadkan, ciidda oo barafka iyo jabka ku xiga ee xarumaha kaydinta saliidda ee gobolka Norilsk, in ka badan 20 tan oo shidaalka naaftada ah ayaa lagu sii daayay nidaamka wabiga Siberia. Waqtiga xaadirka ah, waxaa jira duud gubaysa aagag ballaaran.
Saynisyahanadu waxay ku nuuxnuuxsadeen in shaqada ugu muhiimsan ay hadda tahay sidii loo yareyn lahaa gaasaska hawada lagu sii daayo hawada. Sababtoo ah iyaga ayaa ah in heerkulka guud ee meeraha dhammaadka qarnigii XXI uu sare u kici karo 2 darajo, taas oo u horseedi doonta cawaaqib xumo bayoolajiga Dunida.
Tags: isbedelka cimiladagaasaska cagaaranSiberiya
Qalalaasaha baradhada ee Sakhalin wuu dhammaaday
Filimka xajiye ee biodegradable ee lagu sameeyay Astrakhan
Xagaagan wuxuu ahaa kii ugu kululaa ee Waqooyiga Hemisee taariikhda indha indheynta saadaasha hawada.
Marlabaad: cudurka uu mar dilaay 1,5 milyan oo qof oo ku nool Irland ayaa wali nala jooga
Barnaamij loogu talagalay kobcinta baradho baradhada ayaa laga soo saaray Ukraine
Taariikhda guusha. Elim-Kyzyl Zhar LLP, Jamhuuriyadda Kazakhstan
Baradhadu geedka cusub ee PepsiCo waxaa lagu beeri doonaa beeraha Altai